Ka dib markii dhul dhul ah uu iibsaday ku dhawaad 90% dhirta ay ku dhufatay duufaan, Caleb Tommila waxa uu arkay horgeyntii isbeddelka cimilada adduunku uu ku yeeshay bulshadiisa.
"Hooyaday ayaa ku noolayd aagga nolosheeda oo dhan. Waxay tahay siddeed-sano jir ah, marna arkin wax sidaas oo kale ah. Waxay leedahay geed ka tagay gurigeeda, maxaa yeelay waxay ahayd koritaankii hore, "ayuu yiri. "Asal ahaan, Janno yar yar oo la gooyey way baxday."
Inkastoo Caleb uu ka warramay isbedelka cimilada, waxa uu dareemay in aysan jirin wax aan sameyn karno, "marwalba waxaan ahaa mid ka mid ah kuwa u maleeyay," Waa arrin aad u weyn. Waxa dhacaya. Gacmahaygu way xiranyihiin. "
Xaqiiqdii, bulshooyinka reer miyiga ah iyo aragtidooda gaarka ah ayaa inta badan laga tagaa wada-hadallada istiraatijiyadda isbeddelka cimilada. Siyaasadda isbedelka si loo yareeyo loona bedelo isbeddelka isbeddelka cimilada ayaa ah inay xoogga saaraan aragtiyaha magaalooyinka iyo magaalooyinka. Hase yeeshee ma aha inay sidan oo kale sii joogaan.
Dadka reer miyiga ah ee adduunka ku nool, shaqaalaha dhaqaalaha khayraadka dabiiciga ah, isbedelka cimiladu waa arrin hab-nololeed iyo dimuquraadiyad. Ka soo horjeeda fikrado ballaadhan, dadka reer miyiga ah ayaa aad ugu mashquulsan in ay wax ka qabtaan saameynta isbeddelka cimilada. Deganayaasha deegaanku waxay leeyihiin karti ay ku hayaan bulshooyin firfircooni leh, iyagoo horumarinaya xalal cusub oo ka shaqeeya meelaha baadiyaha ah. Labadii sano ee la soo dhaafay, Machadka Beeraha iyo Ganacsiga (IATP) iyo Xarunta Xarunta Jefferson waxay horey u ahayd waddo cusub oo loogu talagalay ka qayb qaadashada miyiga ee isbedelka cimilada.
Siyaasadda isbedelka si loo yareeyo loona bedelo isbeddelka isbeddelka cimilada ayaa ah inay xoogga saaraan aragtiyaha magaalooyinka iyo magaalooyinka. Hase yeeshee ma aha inay sidan oo kale sii joogaan.
Cimilada Cimilada Rural waxay isticmaalaan habka casriga ah ee loo yaqaan 'Citizens Jury' ee habka xalinta mushkiladaha bulshada iyo horumarinta hogaaminta. Wada-hadalku wuxuu diiradda saaraa bulsho gaar ah oo miyiga ah isla markaana soo ururiya koox si aan kala sooc lahayn loo soo xulay, laakiin koox muwaadiniin ah oo wakiil u ah muwaadiniinta muddo seddex maalmood ah oo loo xilsaaray daraasadda daraasadda iyo doodda. Waxay ku hawlan yihiin samaynta jawi la wadaago, jawaabo bulshada ku salaysan oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo munaasabadaha cimilada. Gudoomiyayaashu waxay leeyihiin xoriyad, macluumaad, iyo khayraad si ay u soo saaraan talooyinkooda iyaga oo ka jawaabaya baahiyaha bulshada, mudnaanta, dareenka, iyo qiimaha.
Iyada oo maalgelin laga helayo Xarunta McKnight Foundation, IATP iyo Xarunta Jefferson waxay wadahadal ku yeesheen Degmooyinka Stevens, Itasca, iyo Winona, oo ka dhigan degaannada miyiga ah ee Minnesota. Bishii Sebtembar 2016, waxay ka qaybgalayaashu ka soo qaybgaleen seddexda beelood oo ku yaala St. Paul si ay u dhistaan xiriiro lala yeesho shaqaalaha hay'adaha dawladda si ay u dhex galaan khayraadka gobolka si qorshaha jawaabta degaanka.
Marka la gaaro 2017, marxaladda labaad ee shaqadan waxay bilaabmaysaa sida ay u shaqeeyaan sidii ay u soo jeedin lahaayeen talooyinka muwaadiniinta muwaadiniinta ee siyaasadda dhabta ah ee saddexda goobood - geeddi-socod oo lagu dhisi doono xildhibaannada, shaqaalaha hay'adaha iyo bulshada guud si loo xalliyo xalalka degaanka u shaqeeyaan dadka iyo meeraha.